I-Kolea Landing Modern Beach House w/ Double Master - I-Airbnb
I-Kolea Landing Modern Beach House w/ Double Master
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJoshua
Xa iyi-197 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-Aloha and Welcome to Kolea Landing
Uhambo olufutshane (ngaphantsi kwamanyathelo ayi-400) kwaye uza kuphola eLantai Beach! Igumbi lethu elinomnyango ophumela ngaphandle eliyi-1 600 sf yeyona ndawo intle yesiqithi kunye nokuphila kwale mihla. Gcwalisa ngamagumbi okulala amabini amakhulu anegumbi lokuhlambela, ikhitshi elikhulu, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlamba iimpahla, kunye ne-lanai yangaphandle. Indlu yethu iquka iindawo zokupaka eziyi-2 esitratweni, ezifunwayo ukuba ukhe waya eLantai. Indawo enkulu kunye nezinto onokuzisebenzisa ezininzi!
Ubomi besiqithi budibana nobunewunewu bale mihla. IHawaii imalunga nendalo kwaye igumbi lethu libonisa ukuzola nokuzola okuquka iKailua. Igumbi elinye lokulala linebhedi enkulu, igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini ezidibeneyo ezinokudityaniswa zibe yibhedi enkulu eyahlulwe phakathi. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu uyafumaneka kwigumbi ngalinye ulawulo olwahlukileyo, imipheme ye-roller emnyama kwigumbi ngalinye kunye nemipheme yezinto eziyimfihlo kuyo yonke enye indawo. I-wifi ekhawulezayo eyi-300 Mbps kunye ne-cable tv. I-Amazon ilawula izibane. Umculo we-Amazon unikezela nge- Kukho indawo ephucukileyo ekude enokulawula izibane, imipheme neefeni. Sikwabonelela ngenqwelo elwandle enezitulo zaselwandle, iambrela, kunye neetawuli zaselwandle zeendwendwe zethu! Ukuba sicelile sineebhodi ezimbini zokutyibiliza emanzini ukuze iindwendwe zethu zizisebenzise simahla emva kokuba zingabhatali.
I-wifi ekhawulezayo – i-197 Mbps
5.0 · Izimvo eziyi-81
I-Lantai (Ka 'ooo) yindawo entle nyhani. Ukusuka elunxwemeni lwesanti emhlophe ukuya kwiiPillboxes (iKa' iwa Ridge) ezithi ndijonge, zimbalwa iindawo ezinazo zonke. I-Lantai beach kunye nokunyuka intaba kwi-Pillbox yimizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle (imizuzu eyi-2 ukuya kweyi-4). I-Kailua beach isekoneni kwaye iKailua Town iivenkile kunye nendawo yokutyela yimizuzu embalwa ngemoto.
Injongo yethu kukwenza iindwendwe zihlale kamnandi kangangoko kunokwenzeka. Sihlala emva kwendlu ibe sinokuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Siye sahlala eO 'ahu ubomi bethu bonke ibe singakuvuyela ukwabelana ngeendawo esizithandayo eKailua naseO' ahu. Ngenxa yezithintelo zeCOVID ezikhoyo ngoku ukuba uya e-O 'ahu kufuneka uthobele Imigaqo Yephondo lase-Hawaii uze uvavanywe kakubi ngeCOVID ukuze uhlale kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle. Sikwabonelela nangendlela yokubhalisa xa ufika, ukungena nokuphuma ukuba uyafuna.
Injongo yethu kukwenza iindwendwe zihlale kamnandi kangangoko kunokwenzeka. Sihlala emva kwendlu ibe sinokuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Siye sahlala eO 'ahu ubomi b…
Inombolo yomthetho: 430070230000, TA-082-679-2448-01